Mas'uul caan ah oo loo aqoonsaday Wadaniga iyo diblomasiga Sanadka. - Caasimada Online
Home Warar Mas’uul caan ah oo loo aqoonsaday Wadaniga iyo diblomasiga Sanadka.
Mas’uul caan ah oo loo aqoonsaday Wadaniga iyo diblomasiga Sanadka.
Safiirka Somalia u fadhiya Kenya Mohamed Ali Amerika ayaa loo aqoonsaday Wadaniga iyo Diblomaasiga Sanadka ee Somalida kadib markii uu labadii sano ee la soo dhaafay ku guuleeystay difaacida iyo waxqabashada Somalida ku nool Kenya ,sida Ganacsatada iyo qaxootiga.
Ganacsatada Somalida Kenya iyo Jaaliyadda ayaa si wadajira xaflad ay ku taageerayaan Safiirka waxay ugu qabteen Nairobi taas oo lagu baahiyay Internet-ka.
Sababaha kor u qaaday sumcada Safiir Amerika waxaa ugu weyn :-
1-Sida uu mar walba uga warqaba qaxootiga Somalida ee ku jira xeryaha Qaxootiga Kenya iyo kuwa jooga Islii Nairobi.
4- Safiir Amerika wuxuu si cad uga soo horjeestay qorshaha Kenya ku dooneyso inay ku dhaawacdo madax banaanida Somalia, ayada oo maamul ay wadato u dhiseysa Gobollada Jubbooyinka, kana tallaabsaneysa Dowladda Somalia.
Gudoomiye ku xigeenka Baarlamaanka Kenya Farah Macalin ayaa si cad wuxuu u caayay uguna hanjabay Safiir Amerika, mar uu Wareysi siinayay Radio Ogaal ee Magaalada Toronto.
Wasiirka Arrimaha dibada ee Turkiga oo Muqdisho khudbad ka jeediyay ayaa si maldahan ula hadlay Cadawga Somalia ee Kenya hada ugu horeeysa wuxuuna ku yiri ” Cadawgiina u sheega inaad aheyn 10 Milyan balse aad tihiin 10+75 Milyan oo Turkisha, mar walbana ogaadana in Somalia tahay dalkeyga labaad idinkuna Turkiga idiin yahay dalkiina labaad”
Si kastaba ha ahaatee, Qofkasta oo Somali dhaba waa inuu adeegsado halku dhiga caan baxay ee SOMALIA SOMALI BAA LEH”.